News Collection: डार्लिङ तेरे लिए !
डार्लिङ तेरे लिए !
नेपाली सिनेमाकी मुन्नी उर्फ रेजिना उप्रेती यतिबेला निकै अधैर्य छिन् । उनको धैर्यको बाँध फुट्न केही घण्टाहरु मात्र बाँकी छन् । हिमालपारिको थलो जोमसोममा भैरहेको सुटिङ सकेर हतार-हतार उनी राजधानी फर्कदैंछिन् 'धर्मा'को प्रीमियरमा डार्लिङहरुलाई बदनाम गराउन । यतिबेला नेपाली फिल्मी संगीतको 'चार्टबस्टर'मा शीर्षस्थानमा रहेको 'धर्मा' गीत 'मान्दैन…मान्दैन'मा आइटम डान्सबाट नेपाली मुन्नीले राम्रो रिभ्यू बटुलिरहेकी छिन् । यति गुड रिभ्यूकी असी वर्षिय श्यामदास वैष्णवले पनि रेजिनाको उक्त डान्सको प्रशंसामा शब्दहरु खर्चिएका छन् । रेजिनाको बोल्ड डान्सले यतिबेला नेपाली सिनेमा बजार गर्माएको छ । रेजिना स्वयमले पनि सो आइटम डान्सबाट तारिफ पाइरहेको बताएकी छन् । निर्मात्री डा. दुर्गा पोखरेलले त मंगलबार आयोजित प्रमोसन प्रेस मिटमा रेजिनाको उक्त डान्सलाई खुलेरै प्रशंसा गरिन् र भनिन् -जेनेरेसन ग्याप पुरा गर्न उक्त गीत राखेका हौं ।'
पोखरेलले भनेजस्तै रेजिनाको उक्त डान्सले जेनेरेसन ग्याप त पुरा गरेको छ नै अरुका अघिल्ला आइटम डान्सलाई पनि माथ दिएको छ । कुरा जेजस्तो भएपनि विहिबारको प्रीमियरमा मुन्नीको उत्तेजक डान्सले कतिलाई जुरुकजुरुक पार्ने हो अनुमानको कुरा ।